रुसले पठायो अमेरिकामा मेडिकल सामग्रीसहितको विमान – Koshidaily
रुसले पठायो अमेरिकामा मेडिकल सामग्रीसहितको विमान
access_alarms Koshi daily २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०५:१२	chat_bubble_outline 0	Comments
एजेन्सी, २२ चैत । अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा विगतमा थुप्रैपटक उतारचढाव आए । यसवेला भने कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा विगतका तिक्तता बिर्सेर यी दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ भइरहेको बताइएको छ ।
बिबिसीका अनुसार हालै मात्र अमेरिकाको सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित न्युयोर्कमा रुसले मेडिकल सामानहरू आपूर्ति गरेकाे छ, जसलाई रूसी जनताको तर्फबाट ‘प्रेमस्वरूप’ अभियानको हिस्साका रूपमा वर्णन गरिएको छ । मार्चको अन्त्यमा रूसले एक कार्गो विमान इटालीमा पनि पठाएको थियो । चिकित्सा सामग्रीका साथै १०० रूसी सैनिक तथा डाक्टर पनि इटाली पुगे । रूसी मिडियाले आफ्नो सरकारको यो उदारताको प्रंशसा गरे ।
यो प्रश्न पनि उठेको छ कि रूसले संकटको घडीमा मद्दत गर्ने नाउँमा कतै फाइदा लिइरहेको त छैन ? अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले एक ट्वीट गर्दै भनेका छन् कि अमेरिकाले रुसद्वारा आपूर्ति गरिएका मेडिकल सामानको भुक्तानी दिइसकेको छ । साथै उनले यो पनि भनेका छन् ‘हामी (रुस र अमेरिका) कोभिड १९ महामारी पराजित गर्नका लागि मिलेर काम गरिरहेका छौं ।
अमेरिकाका अनुसार दुई देशका राष्ट्रपतिहरुबीच फोन वार्तालापमा चिकित्सा सामग्रीको आपूर्तिमा हालसालै एक सहमति भएको थियो । यसैबीच रूसको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ कि अमेरिकाले आधा सामानको भुक्तानी गरिसकेको छ भने आधा सामान रूसले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । यद्यपि यो आपूर्तिलाई रूसी टिभी च्यानलहरुले अमेरिकालाई गरेको सहयोगको रूपमा प्रचार गरेका छन्, जहाँ भुक्तानीको कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
रूसको सबैभन्दा ठूलो मिडिया समूहमध्येकाे एक गजप्रोम मिडियाको एनटीभीको रिपोर्टमा भनिएको छ कि अमेरिकाको जोन एफ केनेडी एयरपोर्टमा रूसी जहाज देखेर साे विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी उत्साहित थिए । उनीहरुले विमानसँग सेल्फी खिचेका थिए । जहाजका पाइलट र रूसीका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई धन्यवाद समेत दिए । पछिल्लो समय न्यूयोर्क शहर विश्व महामारीको केन्द्र बनिरहेको छ । त्यहाँ ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने अमेरिकाभरि ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजार नाघेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । हाल अमेरिकामा पौने तीन लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ ।
रुसले भने कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्न कडा लकडाउन जारी गरेको छ । पछिल्लो एक दिनमा रुसमा ६०१ नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै त्यहाँ कुल ४ हजार १४९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ । रूसमा ३४ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ । हाल रूसका कर्मचारी सबै छुट्टीमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले यो छुट्टी अप्रिल 30 सम्म बढाउने निर्णय गरेका छन्, र यस अवधिमा उनीरूले तलब भने पाइरहनेछन्। (बिबिसी हिन्दीकाे सहयाेगमा)
गाउँपालिका अध्यक्षलाई मार्ने धम्की दिने भारतीय ठेकेदार पक्राउ
एकै समयमा २२७ बालबालिकाको सामूहिक बलि !
६१ वर्षीया पानादेवी भन्छिन् – ६१ वर्षमा म बूढीले त जितेँ, हिम्मत गर्नुस् कोरोना जितिन्छ